6 เม.ย. 2563 - 20:42 น.
ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင် စခန်းတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မယ့်အရေး အထူးစိုးရိမ်နေရပြီး ရောက်ရှိ ပျံ့နှံ့လာရင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ အကူညီပေးရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး REC က အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း ၁၂၈ ခုမှာ လူ တစ်သိန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၃ ပေအကွာမှာ ခြားပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွဲနေကြဖို့ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒုက္ခသည်စခန်း အများစုဟာ သောက်သုံးရေ ခက်ခဲနေပြီး လက်ကို မကြာခဏဆေးဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း သူက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကစပြီး ဒုက္ခသည်စခန်း တွေကို အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ ကို REC က စတင်လုပ်ကိုင်နေပြီး ဧပြီလမကုန်ခင် နှာခေါင်းစည်း ၃ သောင်း စတင်ဖြန့်ဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒုက္ခသည်စခန်း နေသူတိုင်းကို နှာခေါင်းစည်းတွေ ပံ့ပိုးပေးဖို့ လောလောဆယ် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လည်း REC ထံက သိရပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ လူနာ နံပါတ် ၁၅ နဲ့ ၁၆ ရောဂါပြင်းထန်လို့ အသက်ရှူစက်ပေးထားရ
နှာခေါင်းစည်း ဈေးတင်ရောင်းသူတွေကို သည်းခံပြီး လွှတ်ထားမည်မဟုတ် ၊ ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှာခေါင်းစည်းတွေ ဧပြီတစ်လစာအတွက် ၆ ဒသမ ၃ သန်းရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဧပြီ ၅ ရက်က ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီဖော်ပြချက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပေါက်ခေါင်းပြည်သူ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာအေးငြိမ်း တင်ပြခဲ့ရာမှာ ပဲခူးတိုင်းတစ်ခုတည်းမှာတင် လူထု ၅ ဒသမ ၂ သန်းရှိပြီး လူတိုင်းကို နှာခေါင်းစည်းတွေ ပံ့ပိုးပေးဖို့ လောလောဆယ် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လိုအပ်တဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေကို အပြင်ကနေ ဝယ်တဲ့အခါ တစ်ခုကို ငါးဆယ် တန်လောက်ကို ငါးရာတစ်ထောင် ပေးဝယ်နေရပြီး အရည်အသွေးလည်း မကောင်းကြောင်း ဧပြီ ၆ ရက်မနက်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက တာဝန်ရှိသူသုံးဦးနဲ့ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးရာမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် COVID-19 ဂယက်နဲ့အတူ သင်္ကြန်ကာလ အသွားအလာတွေ ကန့်သတ်ထားချိန်မှာ လက်လုပ်လက်စားအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ စား ဝတ်နေရေး ဖူလှုံမှုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ခု အကောင် အထည်ဖော်ဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဧပြီ ၅ ရက်နေ့က သူရဲ့ Facebook မှာရေးသားကာပြည်သူများသို့အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစီမံကိန်းမှာ နေရာဒေသတစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်စဉ်းစားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ဧပြီလ ၆ရက် နေ့မှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားကို အစိုးရက သင်္ကြန် ရုံးပိတ် အတွက် ပစ္စည်း ( ၅ ) မျိုး ကူညီမယ် လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ပုံမှန်၀င်ငွေမရှိတဲ့ အ‌‌ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုအတွက် ဆန် ၈ပြည် ၊ ဆီ ၅၀ ကျပ်သား၊ ဆား ၅၀ ကျပ်သား၊ ပဲ တစ်ပိသာ၊ ကြက်သွန် တစ်ပိသာ တို့ထောက်ပံ့မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အိမ်သုံးမီတာ ဧပြီလ ယူနစ် ၁၅၀ ကို ပိုက်ဆံ မကောက်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ် ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည် အများဆုံးရှိတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကတော့ တစ်ဘက်နိုင်ငံထဲကို မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည် ၇ သိန်းကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုက္ခသည် တွေ အများအပြားဟာ မြို့တော်စစ်တွေအနီးမှာလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ စစ်တွေအပါအဝင် ရခိုင်က အခြားမြို့တွေမှာတော့ မြန်မာ့ တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် အရေအတွက်ဟာ တစ်သိန်း ၆ သောင်းဝန်းကျင် အထိ ရောက်လာနေပြီလို့လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး က RECအတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်း က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေထဲမှာ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦးနဲ့ ကျောက်တော် တို့ဟာ အခြေအနေဆိုးပြီးဒုက္ခသည် အရေအတွက် တိုးလာနေတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
စစ်တွေနဲ့ အခြားမြို့နယ်များက စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ၊ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာ Covid-19 Response အစီအစဉ်ကို REC က လုပ်ဆောင်နေပြီး မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က မမြောက်ဦးမြို့ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း (၃) ခု နဲ့ မင်းပြားမြို့က ဈေး၊ ကားဂိတ်၊ ရွှေပြည်တန်ဆိပ်တို့တွင် လုပ်ဆောင်ပြီးစီးကြောင်းနဲ့ စုစုပေါင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်း (၂၂) ခုထိ လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း နဲ့ မန္တလေးတိုင်းမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နံ့လာမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ခရီးသွားလာခွင့်အပါအဝင် မြို့အဝင်အထွက်တွေကို ဧပြီ ၆ ရက် ည ၁၂ နာရီ ကစပြီး တားမြစ်ကန့်သတ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်း သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့ ကျပ် တစ်ဘီလျံ အသုံးပြုသွားမယ်လို့ မန္တလေးတိုင်း ခေတ္တ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇာနည်အောင်က ဘီဘီစီကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက အခြေခံလူတန်းစားတွေကို စာရင်းဇယားကောက်ယူထားရှိပြီးဖြစ်ပြီး သူတို့ကို စားရေရိက္ခာများပေးပို့ရာမှာ ရောဂါပိုးမပျံ့နှံ့တဲ့နည်းတွေနဲ့ ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ကိုပါ တစ်ပါတည်း စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလိုစီစဉ်ရာမှာ မိသားစုတစ်စုအတွက် အိတ်ငယ်လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထုပ်ပိုးပြီး တစ်ခါတည်း ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူထုအနေနဲ့ အိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့ ၊ မဖြစ်မနေ ထွက်ရမယ် ဆိုရင်လည်း နှာခေါင်းစည်း တပ်ဖို့ ၊ လူတဉီးနဲ့ တဉီး ခပ်ခွာခွာ နေကြဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီလ၅ ရက်နေ့အထိ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၂၁) ဦးတွေ့ရှိလာရပြီဖြစ်ပြီး တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာ ထိုင်းနယ်စပ်ကနေဝင်လာသူ နှစ်ဦးမှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရတယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူ အချင်းချင်းကြားတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်သူများထံသို့လည်းကောင်း ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားပြီး ကပ်ရောဂါကြီး ဖြစ်ပွားရန် အလားအလာ အလွန်များပြားနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကမတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြား ပြန်လာသူတွေဟာ စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ ဝင်ထွက်သွားလာနေတာရှိပြီးတော့ အချို့လည်း စခန်းတွေမှာ အတူရောနေကြတယ်လို့လည်း အကူညီပေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေထံ ကနေသိရပါတယ်။
ဒီလူတွေကို စခန်းအချို့မှာ သီးသန့်ခွဲ ထားတာလုပ်နိုင် ပေမယ့် အများစုမှာတော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ REC ကပြောပါတယ်။
" အခုက နိုင်ငံခြားပြန်တွေလည်း တော်တော့်ကို ရောက်နေကြတယ်၊တချို့ရွာတွေက ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြန်လာသူတွေကို သီးခြားထားဖို့ လုပ်ထားကြတယ်။ တချို့ရွာတွေ ကျတော့လည်း မလုပ်ဘူး၊ရသေ့တောင်မြို့ကတော့ ဝင်ချင်သလို ဝင်ထွက်နေကြသေးတယ် ထင်ပါတယ်၊တစ်ချိုရွာတွေဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်တွေ ရှင်ပြုပွဲတွေ လုပ်လို့ ကောင်းတုန်းပဲ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားက လည်း အကန့်အသတ် နဲ့ ဆိုတော့အစိုးရက မတားနိုင်ဘူးထင်တယ် " လို့လည်း ရသေ့တောင် ဒေသခံတစ်ဦး ကပြောပါတယ် ။
စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၁၂၈ ခုမှာ ၃ ခုမှာ တော့ မိသားစုဝင်တွေဆီ ရောက်လာနေတဲ့ နိုင်ငံခြားပြန်တွေ အတွက် သီးသန့်အဆောင်တွေစီစဉ်နေပါတယ် လို့ REC ကနေသိရပါတယ်။
" စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအများစုက ၆ ပေပတ်လည် အဆောင်လေးတွေမှာ လူ ၆ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက် အထိနေကြတယ် တချို့ က ဘုန်းကြီးကျောင်းလို ဟောခန်းမ ကျယ်တွေမှာ လူတွေက ရာနဲ့ချီ ပြီးနေနေကြ တယ်၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ၃ ပေခွာနေဖို့ က စခန်းအကုန်လုံးနီးပါးမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း ကိုဇော်ဇော်ထွန်း ကပြောပါတယ်
ဒါ့ အပြင် စခန်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ဟာသောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိနေပြီးတော့ လက်မကြာ မကြာဆေးဖို့ကလည်း မလွယ်ဘူး လို့သူက ရှင်းပြပါတယ်။
အစိုးရ ကလည်း အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ မြို့တွေမှာလုပ်လာပေမယ့် နှာခေါင်းစွပ်လို့ လက်ဆေးရည်လိုဟာမျိုးတွေ စခန်းတွေကို အထောက်ပံ့ ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။
စစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ
ရခိုင်မှာ တော့ ဒေသတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု သွားလာမှု ကန့်သတ်တာတွေ မတွေ့ရ သေးသလို ၁၇ မြို့နယ် မှာ ၉ မြို့ နယ်ကအင်တာနက်ဖြတ်ခံထားရလို့ ကိုရိုနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာပိုင်းမှာလည်း အထူးအားနည်းတယ်လို့လည်း ရခိုင်ဒေသခံတွေ ကပြောပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းနေသူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေများသလို အာဟာရလုံလောက်အောင် မစားရတဲ့ အပြင် တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ကလည်း အထူးစိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်း ကိုဇော်ဇော်ထွန်းကပြောပါတယ်။
" ဒီမှာက အရာရာနောက်ကျနေတယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားက လည်းလက်လှမ်းမမီတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီတော့ ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်း စဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖြစ်ဖို့များတယ်" လို့ လည်းသူကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စစ်ဘေးရှောင်များရဲ့ ကိုရိုနာ